UXolo kunye neNdalo: Ikhabhinethi yoyilo lomthi epholileyo - I-Airbnb
UXolo kunye neNdalo: Ikhabhinethi yoyilo lomthi epholileyo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNicole
Ukunikela ingqalelo: Iphuli yethu ivulekile ukuba ingabhukuda kodwa isalungiswa kancinci kufutshane nelaphu.
Seta kwindawo eluhlaza esithanda ukuyibiza iVillachampa, indlu yethu yamaplanga yale mihla epholileyo ikumema ukuba uphephe ingxolo nokungcola kweSantiago kwindawo yasemaphandleni epholileyo kwimizuzu eyi-45 ukusuka kumzantsi wedolophu ngqo eRuta 5. Ungaphinda uthathe uloliwe usuka kwi-Estacion Central, e-Alameda (eSantiago) uye kwisikhululo seSibhedlele kwaye siza kukuthatha esikhululweni simahla, akukho mfuneko yokuhamba!
Le ndawo ifana nepaki enkulu eluhlaza ezaliswe zizitiya zemifuno nemithi. Ikhabhinethi ibeka phezu kwe-1.2 yeehektare zomhlaba ohlaza olungiswe ngenyameko kunye nombono ongasempumalanga weentaba zeAndes. Ngaphaya kwebhulorho encinci emhlophe kwipropathi, uya kufumana ikhabhinethi yakwa-Airbnb enendawo yabucala eyaneleyo. Konwabele ukufunda kwakho ixesha elingekhoyo, ukuziqhelanisa neyoga, ukucamngca, ukubukela ukutshona kwelanga, okanye ukuqubha kwi-eco-pool yethu. Kufuneka siqaphele: ngamanye amaxesha siqesha indawo yedama, ke ngamanye amaxesha kungafuneka wabelane :)
Ngamanye amaxesha iipakethe ezilungileyo zifika ngokona bukhulu buncinci. Ngaphandle kwamasango eVillachampa kukho idolophu ebekwe kwindlela encinane. Awuyi kufumana okuninzi kodwa uya kufumana okwaneleyo. Iimarike ezincinci zigubungela ukutya kwakho okusisiseko kwaye udlule nje kwicawa encinci eyenziwe ngamaplanga, unokutsalwa livumba le-apple strudel entsha kwi-Bakery yaseJamani. Kwaye kuzo zonke iindwendwe zethu ezikhathalele impilo, fumana ubusi bendawo, imbewu, iinkozo, kunye nezinye iimveliso ze-organic kunye ne-vegan kwiVegan Shoppe kwisikwere sedolophu. Ufuna ukutya ngaphandle? IReloj, ePlaza, inika inyama enencasa kunye neebhega zevegan kunye neentlobo ngeentlobo zebhiya yobugcisa. Thatha uhambo oluya kwimarike yomfama wasekhaya kabini ngeveki ukuze ufumane iziqhamo ezitsha kunye nemifuno emva koko uthathe i-scenic drive imizuzu engama-25 phantsi kwendlela.
SinguNikki kunye noJavier kwaye siya kuba ngabamkeli bakho abaphambili! Xa singekho, umama kaJavier, uMilena, uya kulawula. Sithetha isiNgesi, iSpanish nesiJamani. Sisebenza malunga nepropathi imini yonke ukuze ukwazi ukusihlaba umkhosi nangaliphi na ixesha ukuba kukho into oyifunayo. Ukuba asikho ngqo emehlweni, ungasidubula umyalezo ka-WhatsApp kwaye siza kube silapho ngokukhawuleza! Siyavuya ukuhlala phantsi newayini okanye ibhiya kwaye sincokole kakhulu :)
SinguNikki kunye noJavier kwaye siya kuba ngabamkeli bakho abaphambili! Xa singekho, umama kaJavier, uMilena, uya kulawula. Sithetha isiNgesi, iSpanish nesiJamani. Sisebenza malung…